Oromia - Oromia Shall be Free
Ilmaan Oromoo dhalootaan naannoo Jimmaa taatan maraaf!
(Waamicha kana hatattamaan walii raabsaa, keessumattuu warri gara Jimmaa) Waamicha seenaan isinii dhiheessaa jirtu jalaa yeroodhaan owwaadhaa! (Boruu Barraaqaatiin) Oromiyaan ciniinsuu warraaqsaa irra jirti. Bilisummaa …
Prof. Asafaa Tafarraa Dibaabaa baga gammadde/baga gammanne..
Prof. Asafaa Tafarraa Dibaabaati! Dhaloonnisaa Macca. Barreessa kitaabota hedduuti. Maatii qotee bulaa keessatti dhalatee guddate. Hayyuu kanarraa gadi taa’ee baradheen beeka.Qabsoo barataan Oromoo kamuu dabarsu …
From observer 26.04.2015 On 23 of April 2015, a high level conference entitled ‘Cartoon Democracy – Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia’ was held …
Uummata Bal’aa Gaanfa Afriikaa, Uummata Hacuuccan Miidhe.
Seensa Oromoon yeroo mammaaku “Baraa fi murxuxxee gadi jedhanii jala ba’u” jedha.. Haa ta’u iyyuu malee murxuxxee gugguuffiin nama hin baraarre, yoo gadi jedhan …
Oromia Broadcasting Service (OBS) tajaajila isaa eegaluuf jedhu..
Akkuma beekamu yeroo darbe Gaazexeessitoonni TVO Digdamaa ol ta’an “Uummata Gaaffii mirgaa gaafatuuf maalif Rasaasni deebii ta’a? akkasumas wanti hafe haa hafu malee waan hin …
The Cruel Massacre of the Dictator Ethiopian Government on Oromo People Can Not Be a Treat to The Oromo Struggle!
The Ethiopian Government EPRDF/TPLF have been oppressed Oromo people for about 23 years. Since it came to power the thousands of Oromo people have been …
By William Davison October 27, 2014 (Bloomberg Business Week) –Ethiopia’s government illegally detained at least 5,000 members of the country’s most populous ethnic group, the …
Seenaa Abdiisaa irra: Lafti gaanfa Aafrikaa keessatti Oromoon irra tamsa’ee qubatee jiru Oromiyaa jedhamti. Oromiyaan biyya Oromooti. Biyyi kun teessuma lafaatin gaanfa Afrikaa, Empayera …